Barcelona, Real Madrid & Juventus Oo Weli Ku Adkeysanaya E.Super League Iyadoo Maxkamad Ay Soo Dhoweysay Go’aankooda – Garsoore Sports
Kooxaha kubbadda cagta ee Barcelona, ​​Juventus iyo Real Madrid ayaa soo dhoweeyay go’aanka maxkamadda Madrid ay ku xaqiijisay inay xaq u leeyihiin inay ka tartanka European Super League oo hakad galay kaddib markii inta badan kooxihii lagu aas-aasay ay isaga baxeen cadaadis uga yimid taageerayaasha iyo dadka ku lugta leh aawadeed.
Maxkamaddu waxay Jimcihii xukuntay in dacwaddii xiriirka kubbada-cagta Yurub (EUFA) ee ka dhanka ah aas-aasayaashii 12ka kooxood ee tartanka ay tahay in la joojiyaa. Arrinta haatan looma gudbin doono Maxkamadda Caddaaladda Yurub ee Luxembourg.
Abriil 18-keedii, laba iyo toban naadi ayaa ku dhawaaqay rabitaankooda ah inay ku biiraan tartanka European Super League iyagoo ah xubnihii aasa-asay tartankaa, laakiin tartanku ma sii socon wax ka badan laba iyo toddobaatan saacadood markii ay ka baxeen sagaal naadi oo kamid ah 12kii naadi ee aas-aasay kaddib mudaaharaadyo ay taageerayaasha kooxahaasi ku muujiyeen diidmadooda sidoo kale waxaa kasoo horjeestay UEFA, FIFA, iyo xiriiradda horyaaladooda, iyo sidoo kale dhaleeceyn ka timid Dowladda Ingiriiska iyo Qoyska Boqortooyada UK.
UEFA waxay ciqaabtay mid kasta oo kamid ah sagaalka naadi ee kala ah Manchester United, Manchester City, Chelsea, Liverpool, Tottenham Hotspur, Arsenal, Atletico Madrid, Inter Milan, iyo AC Milan – oo lagu ciqaabay 7 milyan oo ginni middiiba.
Bayaan ay si wada jir ah u soo saareen saddexda naadi ee diiday in ay ka baxaan tartanka, ayay ku sheegeen in ay soo dhaweynayaan go’aanka maxkamadda Madrid ee dhaqan gelinaya in laga qaado cunaqabateynta la saaray dhammaan naadiyadii aasaasay European Super League.
“FC Barcelona, ​​Juventus, iyo Real Madrid CF waxay soo dhaweynayaan dhaqangelinta go’aanka maxkamadda ee maanta, isla markiiba, waajibaadka UEFA ee ah inay ka furto falalka ka dhanka ah dhammaan naadiyadii aasaasay European Super League, oo ay ku jirto joojinta dacwadaha anshaxa ee ka dhanka ah saddexda naadi. xayiraad lagu soo rogay sagaalka naadi ee aasaasay iyaga si looga fogaado tallaabada anshaxa ee UEFA, ”ayaa lagu yiri bayaanka.
Naadiyada ayaa ku adkeysanaya in Super League loogu talagalay in lagu jebiyo kelitalisnimada UEFA ee kubbadda cagta Yurub sababta oo ah iska horimaadka danaha iyo xakameynta maaliyadeed oo aan ku filnayn.